कीमा बनाएको मासु, एउटै व्यञ्जन भन्दा धेरै नरम, अधिक कोमल र tastier, मासु एक टुक्रा बनाइएका को स्टेक। तर, यो यस्तो असामान्य खाने को तैयारी को प्रक्रिया धेरै समय लाग्छ भन्ने टिप्पण लायक छ। गहिरो बोसो मा frying सूक्ष्मता तरकारी वा Mince कटा गर्नुपर्छ अघि मुख्य घटक पछि।
कीमा बनाएको मासु स्टेक: आवश्यक सामाग्री
दुबला मासु - पाँच सय ग्राम;
फैटी पोर्क - पाँच सय ग्राम;
प्याज - तीन ठूलो टाउको;
कुखुरी गरेको अन्डा - दुई ठूलो टुक्रा;
Leek - केही तीर;
गहुँको पीठो - तीन वा चार ठूलो चम्मच;
ब्रेडक्रंब - आधा कप;
सूर्यमुखी तेल - एक गिलास (frying लागि);
नुन - आधा मिठाई चम्मच;
स्वाद र इच्छा - मरिच र ताजा जडीबुटी।
कीमा बनाएको मासु स्टेक: पकाउने को चरण प्रक्रिया द्वारा एक कदम
मिश्रित भराई बनाउनको लागि, तपाईं बोसो पोर्क र दुबला मासु एक पाउन्ड लिनु आवश्यक छ। तिनीहरूले धोए र ठूलो टुक्रा मा कटौती गर्नुपर्छ। त्यसपछि, यो मासु Grinder प्रशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ, तर यदि वांछित एक ब्लेंडर र तेज-चक्कु नलिका प्रयोग गरेर यसलाई कटा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, यो कटौती गर्न र तीन ठूलो प्याज मनमोहक छ। त्यसपछि परिणामस्वरूप भराई मिश्रण राम्रो थप्दा मरिच, कटा जडीबुटी, नुन, कटा Leek र एक कुटपिट अन्डा द्वारा हात आवश्यक छ।
यस कुटपिट तयार प्रक्रिया
तपाईं थाह छ, प्राकृतिक स्टेक आवश्यक पूर्ण कुटपिट जोडतोडले हुन frying अघि कटा। यस्तै लागि किन छ कीमा बनाएको मासु पकवान पनि कुटपिट तयार गर्न आवश्यक छ। , यो एक अन्डा whisk, को नुन र एक बिट थप्न वनस्पति तेल, त्यसपछि गहुँको पीठो तीन वा चार ठूलो चम्मच प्रयोग गरेर राम्ररी मिश्रण। यो कुटपिट मासु संग कटा तरकारी encapsulate viscous बारी र राम्रो गर्नुपर्छ भनेर टिप्पण लायक छ।
कीमा बनाएको मासु स्टेक: गठन र Browning व्यञ्जन तला
पकाएको कीमा बनाएको मासु तीन वा चार ठूलो चम्मच को राशि लिइएका र एक काटन बोर्ड मा उहाँलाई बन्द लड्न, एक बल अप आउँदैछ पर्छ। त्यसपछि यो बाहिरबाट साँचो स्टेक जस्तै भनेर मासु आवश्यक छ समतल। अर्ध-समाप्त उत्पादन पूर्णतया अन्डा कुटपिट मा डूबा हुनुपर्छ र त्यसपछि चाँडै ब्रेडक्रंब मा रोल र तुरुन्तै सूर्यमुखी तेल उम्लिरहेको एउटा तातो कराइ जोडतोडले।
नियम, यो पकवान को पूर्ण कोमलता लागि रूपमा चाँडै तयार छ पाँच दस मिनेट गहिरो-तला पकड आवश्यक कीमा बनाएको। सबै पक्ष बाट Obzharivaya schnitzel, यो हेर्न भनेर यो जल छ, तर केवल browned निश्चित हुन।
खाने को लागि सही रुचाउने
फ्लैट र हरियो पात सलाद संग सजाया सुन्दर प्लेट मा सिफारिस गरिएको छ तालिका यो पकवान सेवा गर्छन्। त्यसैले, तपाईं एक स्वादिष्ट, नरम र कोमल स्टेक छ छौँ। फोटो व्यञ्जन, माथि दिइएको छ जो, संग नुस्खा एक छुट्टी भोजमा रूपमा प्रशिक्षण लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र सामान्य पारिवारिक खाने को लागि। तथापि, अतिथि एक स्वादिष्ट खाना मिलेर सिफारिस गरिएको एक मासु schnitzel प्रस्ताव।
Margarine संग नुस्खा सर्टकेक। margarine र खट्टा क्रीम मा बिस्कुट कसरी खाना पकाउनु
विनीज कुकीहरू - तपाईंको डेस्क मा अष्ट्रीया विनम्रता
यो घर khinkali मा खाना पकाउन गर्न सम्भव छ?
गुलाबी कसरी खाना पकाउनु। केही सुझावहरू
कसरी सुन्दर कपालको कपाल बनाउनुहोस्
किन चक्की एस्ट्रोजन लागि आवश्यकता?
त्यो लेख 109 को आपराधिक कोड अमेरिका को? लापरवाही द्वारा मृत्यु पैदा
रगत वा मूत्र मा सेतो रक्त कसरी कम गर्ने?
कसरी तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भनेर थाहा गर्न: मुख्य लक्षण "melancholy प्रेम"
काठ घरहरू निर्माण। कति बोर्डहरू 150 150 एक घन मा गर्न?
कति कठिनाई बिना साना हेर्न
Duchenne-Erb को पक्षाघात: कारणहरू र उपचार